Amboaram-bolo vita amin'ny vy marobe Winsom
Cages metaly lehibe akoho mihazakazaka eo an-tokotanin'ny akoho amam-borona bitro hen'omby 6x3x2m
10-29 Sombiny 30-49 Sombiny
$ 219.00 $ 209.00 199,00 $
Ity cage ity dia mety amin'ny akoho sy alika. Ny trano fiompiana biby fiompy miaraka amina tafo dia noforonina miaraka amin'ny fampiononan'ny biby sy ny fiarovana azy io ary hanampy amin'ny fiarovana ny biby fiompinao amin'ny orana, lanezy, masoandro, sns.
2) lamba Oxford tsara kalitao miaraka amin'ny firakotra PVC ary 100% miaro amin'ny rano sy UV miaro.
3) Harato hexagonaly metaly misy fonosana plastika.
Tube fantsom-boaloboka 38 * 1.0mm
Ity tranom-borona ity dia mety indrindra amin'ny fitazonana ny akoho ao anaty tokontany kely sy lehibe, manakana ny akoho tsy hirenireny, manome fiarovana ny orana sy ny masoandro ary hiaro ny akoho tsy ho mpiremby. Na dia atao ao an-tsaina indrindra ity akoho ity aza ny akoho dia hisy zavaboary hafa toy ny bitro, alika kely ary guinea pig. Ity hazakazaka akoho ity dia vita amin'ny fantsom-boaloboka ary misy tafo vy mateza hiantohana ny fitoniana ao anaty fefy rehefa mandeha ny fotoana. Mbola tsara kokoa aza, ny akohoo dia hijanona milamina, maina ary faly amin'ny lamba mitafo tsy miaro amin'ny lamba Oxford izay miaro ny masoandro ary manakana ny ranonorana. Ny tariby akoho mavesatra dia manidy tanteraka ny sisiny sy ny varavarana ary ny tafo mba hahazoana antoka fa tsy ho afa-mandositra ny akoho ary hisorohana ireo vahiny tsy nasaina hiditra. Ny varavarana mikitroka mandranitra dia mamela fidirana mora foana hiditra sy hivoaka ny koop ary misy hidin-trano mba hiantohana ny farany fiarovana. Ity kitapo akoho akoho ity dia miaraka amin'izay ilainao rehetra amin'ny fanamboarana ilay vala, ao anatin'izany ny torolàlana momba ny fivoriambe hanampy anao amin'ny dingana tsotra.
【Fananganana vy maharitra】 Ny penina akoho dia amboarina miaraka amina vy vy avo lenta, matevina ary tsy mora simba, mifikitra mafy amin'ny tany rehefa ampiasaina eny ivelany. Ankoatr'izay, ny endrika mampifandray haingana dia mamela ny bika hapetraka ao anatin'ny minitra vitsy monja
【UV & Cover tsy mahazaka rano】 Arovy ny akohonao amin'ny toetrandro sy ny singa ivelany. Ny tampon'ilay hazakazaky ny akoho dia manana endrika mirongatra, mamela ny rano, ny potipoti-javatra ary ny lanezy mirotsaka mora foana fa tsy miangona, ka ny coop dia tsy mahazaka toetr'andro ary maharitra mateza.
【Mora diovina】 Ny fantsom-piaramanidina dia voaviraviraina ka mahazaka harafesina ary mora hitazomana tontolo madio ho an'ny akohoo. Ny madio dia mora diovina amin'ny lamba lena na rano mandeha. Ny cages chick misy latches dia tsy mety aminao ihany raha hikarakara akoho, fa ho an'ny biby kely hafa toa ny bitro sy gana, sns.
Net Vato vy hexagon hexagon】 matevina & mateza, nandrisika. ny banga kely eo anelanelan'ny meshes dia manampy fiarovana sy varavarana vy mihidy miaraka amina fehiloha sy harato tariby manome fiarovana lehibe ho an'ny akohonao amin'ny biby mpiremby
Teo aloha: 6x12m Clear PVC Film Party Tent Transparent Film Greenhouse
Manaraka: Firafitra vy any ivelany ho an'ny tranon'akoho lehibe 8x3x2m
Tent azo aondrina
Trano fampirantiana varotra
Tranon'olom-baravarana manify 10x15ft (3 × 4,5m)
40mm Profile momba ny tongotra mavesatra mavesatra modely mavesatra ...
Tent Portable Fold Tent 2x2m
Gazety mihosin-trano any ivelany miaraka amin'ny sisin-tany 3x6m
Tranom-pisakafoanana ivelan'ny trano 3x3m
Gazety ivelan'ny trano 3x3m